Mpamboly any ivelany Reef Resilience
Ny tanjona farany ho an'ny haran-dranomasina vao napetraka dia ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny tontolo iainana ny haran-dranomasina ary hampiroborobo ny fanarenana ny vatohara. Izany dia mitaky famoahana (na famindrana) ireo vatohara vaovao ireo ho any amin'ny haran-dranomasina. Raha mipetaka amin'ny substrate artifisialy izy dia vita ny fivoahana rehefa avy mitombo fotoana fohy amin'ny tontolo voaaro, toy ny a tao-monina or tany. Fotoana kely tokony hapetraka ho an'ny fitomboan'ny isan'ny mpanjono dia ny kolonisa lehibe kokoa no atolotra ho amin'ny fiatoana ambony kokoa amin'ny faritra voajanahary voajanahary noho ny kolonisa kely. ref
Fijerena singa mitaiza amin'ny vatam-paty izay notehirizina tao amin'ny garderie iray miorina eo ambony ranomasina alohan'ny fanambadiana. Sary © SECORE International / Reef Patrol
Ny fikaikezana ny tranokala iray dia mitaky fandaminana sy fiheverana tsara, ary mampiasa a site selection guide mety hanampy. Ny anton-javatra sasany tokony hodinihina dia ny fampifangaroana ny fepetra takian'ny fonenan'ny karazana haran-dranomasina izay avoaka (toy ny angovo onja na ny halaliny) ary ny fampifangaroana ny tranokala ary ny fitaovana ampiakarina amin'ny vatohara. Ny epoxy anaty rano no fitaovana fampiraisana indrindra, fa amin'ny toeram-ponenana rugose antonony kosa ny substrates sasany dia mety hapetaka anaty elanelam-pifanelanelana amin'ny haran-dranomasina. Raha vantany vao voafidy ny fomba sy ny fomba fampikambana, dia tokony horaisina ny saina amin'ny amin'ny sarintany na ny fametrahana ny tranokala (ohatra: ny fampiasana ny fividianana fehikibo na ny teti-dratsy lehibe), izay ahafahan'ny fanaraha-maso mahomby kokoa. Ny Tags dia azo ampiasaina hanondroana sy hanarahana substrat an'ny tsirairay manara-maso ireo mpikaroka coral.
Ny torolàlana ankapobeny amin'ny famoahana ny ala dia azo jerena ao amin'ny Coral Gardening Outplanting page.
Manomàna ny tranokala sy ny fametrahana ireo mpangatsaham-bidy efa nafindra toerana mba hahafahan'izy ireo mamantatra sy manara-maso amin'ny manaraka.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana amin'ny laoniny ny zava-mahadomelina Elkhorn Coral (Acropora palmata) Fandraharahana mampiasa Larvae voaangona avy amin'ny Gametes
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHoronan-tsary SECORE - Manamboatra ny harambato